Ii-FAQs -I-Dalian Honest Equipment Co, Ltd.
: Ungayithenga Njani?
A: 1. Okokuqala, ngokungeniswa kwemveliso yethu, nceda usixelele ukuba zeziphi iimveliso onomdla kuzo, kwaye uzame ukusixelela indawo oyisebenzisayo kunye neemfuno zokusebenzisa.
2. Abasebenzi bethu bokuthengisa baya kuncoma ukucwangciswa kwemveliso efanelekileyo kuwe ngokweemfuno zakho, njengamazwe aseYurophu afuna ukuqinisekiswa kwe-EU, kufuneka sincome iimveliso ezineziqinisekiso ze-CE, iUnited States ineemfuno zokukhusela okusingqongileyo kubathengi, siya kucebisa i-EPA imveliso, kwaye amanye amazwe akanayo iimfuno ezizodwa, siya kuncoma iimveliso ezingenaxabiso.
3. Abathengi banokuthi babeke phambili iimfuno ezingasetyenziswanga, ezinje ngokutshintshwa kwethrekhi yentsimbi, ukubuyisela injini yeJapan yeYanmar, ingalo yecala elijingayo, ukufakelwa komoya nezinye iimfuno ezizodwa.
4. Emva kokuba zonke iimfuno ziyaneliseka, nceda usazise ubungakanani beodolo, indlela yokuhlawula, umamkeli, ulwazi lwezibuko. Sihlala sifuna 30% yokuhlawula kunye ne-70% ngaphambi kokuthunyelwa.
5. Ityikitye ikhontrakthi, yaqala imveliso emva kokufumana intlawulo kwangaphambili, kwaye yaqala ukupakisha kunye nokuhanjiswa emva kokufumana intlawulo eseleyo.
6.Umthengi ufumana imveliso kwaye uqala ukuyisebenzisa.Siza kuthumela abathengi imiyalelo yokusebenza eneenkcukacha kunye nencwadana yolondolozo, abathengi akufuneki bakhathazeke kukusetyenziswa kwengxaki.
7. Iindawo eziphambili zeemveliso zethu (i-injini, imoto, i-hydraulic system) ziqinisekisiwe unyaka omnye, kwaye siya kutshintsha nayiphi na indawo yezona ndawo ziphambili ngaphandle kwentlawulo.
: Ufumana njani owona matshini ulungileyo kunye nexabiso elifanelekileyo?
A1) Inkonzo yokuthengisa kwangaphambili: sinokukunceda ekufumaneni izixhobo ezifanelekileyo ngokwemfuno yakho.
2) Inkonzo yentengiso: silandela ngokungqongqo imigaqo yorhwebo, ukusayina isivumelwano, ukulandela inkqubo yemveliso, ukulawula umgangatho wempahla, ukulandelela ukuhanjiswa kwempahla, ukuqinisekisa ukuba ufumana iimpahla ezifanelekileyo ngokukhuselekileyo.
I-3) Inkonzo yasemva kokuthengisa: sibonelela ngezixhobo ezisetyenziswayo nezixhobo, ezinjengengxowa yezixhobo.
Sinencwadana yokusebenza yokuyalela ufakelo olusisiseko kunye nokusebenza; isikhokelo sevidiyo ngenkathazo yokudubula; iinjineli zilungele ukugcinwa kwentsimi kunye nokulungiswa xa kufuneka njalo.
: Unayo incwadana yomatshini?
A: Ewe, sinokubonelela ngencwadi, isoftware yeCD kunye nokufaka ividiyo ukukunceda usebenze kakuhle kumatshini.
: Ukuba asazi ukuba sisebenzisa njani umatshini, ungasifundisa?
A: Ewe kunjalo. Sinokukunika uqeqesho lwasimahla kunye neenjineli ezifumanekayo kuqeqesho ngoomatshini kwinkonzo phesheya kolwandle ukuba ungathanda ukubanika inkcitho yeshishini.
: Njani malunga nenkonzo yakho emva-ukuthengisa?
A: Sinikezela ngenkonzo yobungcali kunye nexesha elifanelekileyo emva kokuthengisa, iiyure ezingama-24 zenkonzo ye-Intanethi ngefowuni, skype kunye no-whatsapp.
: Njani malunga nexesha lakho lokuqinisekisa?
A: Sinikezela ngesiqinisekiso somgangatho sonyaka omnye kwiindawo eziphambili.
: Lithini ixesha lokuhambisa?
AEmva kokufumana intlawulo yokuqala, iimpahla ziya kuba zilungele ukuhanjiswa zingadlulanga iintsuku ezi-5. Ixesha lokuphumla lixhomekeke kumgama kunye nendlela yothutho ekufuneka kuthethathethwene ngayo.
: Athini amagama okuhlawula onokuwamkela?
A: 30% intlawulo yokuqala, 70% yentlawulo eseleyo xa iimpahla zilungele ukuhanjiswa ngeT / T.
: Ngaba sinokufumana iodolo ekhethekileyo njengokutshintsha kwemigaqo, ukwenza ilogo?
A: Ewe, samkela ulwenziwo. Singayenza icace kwikhontrakthi kwaye emva koko uyilo lwethu lokuqala lobugcisa kunye nemveliso ngokweemfuno zakho.